Internet Explorer: Wax ka bedelida Sawirada ku jira Shabakad HTML-ku-saleysan HTML Martech Zone
Khamiista, Sebtember 7, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waa kuwan tusaale, adoo adeegsanaya tifaftiraha TinyMCE:
Haddii aad ku furato tifaftirehan Firefox, waxaad dareemi doontaa in jiidaya sawirka uu ilaalinayo saamiga sawirka:
Si kastaba ha noqotee, Internet Explorer, ma xajineyso saamiga dhinaca gebi ahaanba. Suurtagal ma tahay in la xakameeyo cabirka sawirka sida uu ugu jiiday Internet Explorer? Waxaan sahamiyay shabaqa waxaanan la imanayaa anigoo madhan midkan! Ma jiraa qof ka shaqeeyey arintan isagoo ka soo celinaya guryaha waxyaabihii 'DOM' ka dibna si sax ah u dheellitiraya sawirka buuxa? Tilmaamo kasta ama tabaha ayaa la qadarin doonaa!
Sep 12, 2006 at 1: 35 PM
Kaliya dabagal… mid kamid ah dhibkeena dhibka weyn, Marc, wuxuu cadeeyay inuu adeegsan karo dhacdo fure ah si uu wax uga badalo sawirka una ilaaliyo heerka saamiga kadib dhacdo jiidis ah Waa kuwan qaar ka mid ah ilaha uu gudbiyay:
Febraayo 4, 2008 saacadu markay tahay 11: 25 AM
Waxaan la kulmay isla arintaas.
Fadlan ma iga caawin kartaa xallinta?